विकास कसका लागि ? - BP Bichar
Home/दस्तावेज/विकास कसका लागि ?
दस्तावेजवी पी विचार
BP BicharSeptember 11, 2018
विकास गाउँमा भएको छ कि आँकडामा ? एउटा–दुइटा उदाहरण दिएर मेरो कुरा प्रस्ट गरूँ । अस्ति एउटा समारोहबाट फर्किंदै थिएँ । त्यो समारोहभित्रको वातावरण र बाहिर अड्याइएका ठुल्ठूला महँगा गाडी देख्ने जोसुकैले पनि भन्ने थियो, नेपालमा ठूलो विकास भएछ र यहाँका मानिस धेरै धनी भएछन् ।
त्यसै दिन म पहाडतिरबाट यहाँ (काठमाडौं) आएर डेरा गरी बस्ने केही विद्यार्थीको कोठामा गएँ ।
साभार : ‘बिपी कोइरालाको आलेख, भाषण र अन्तर्वार्ता’
नयाँ पत्रिका #